Luz de Maria - Akaiky ny fampitandremana - Manisa ny fanjakana
Izahay dia	Luz de Maria de Bonilla	, 19 aprily 2020:
Rehefa nivavaka aho dia hoy i Jesoa malalantsika tamiko:
Izaho no Andriamanitry ny lanitra sy ny tany!
Tiako ny olombelona rehetra!
Ny mpanota rehetra izay mihemotra matetika nefa tsy mampihena ny fahotany dia miteraka fahoriana be loatra amiko. Vonona hamela ny heloky ny olombelona rehetra aho izay manakaiky ny fahotany, nibebaka tanteraka, ary manana faniriana lehibe tsy hilatsaka indray.
Tao anatin'ny maha-olombelona dia nahita zanaka ny ahy izay maniry hiverina eo anilako. Feno fitiavana sy fahasambarana aho, ary raha jeren'izy ireo ny fibebahan'izy ireo, dia mahita azy ireo eo anoloako toy ny nataoko tamin'ny fotoana voalohany nanolorany ny tenany tamiko (Lk 15: 11-32). Na dia amin'izao fotoana izao aza, rehefa lao ny zanak'olombelona, ​​matahotra sy marary, henoko ny fanevatevana lehibe natao tamiko, fanesoana lehibe ho an'ny Reniko, ary nikatona ho an'ny Vahoakako ireo fiangonana, oh… manaintaina re! (jer. Mika 6: 3-8).
Izany no antony iantsoako ny oloko mahatoky, miantso ny olona rehetra aho ho vavolombelon'ny fitiavan'izy ireo ahy amin'ny asany sy ny ataony ho an'ireo rahalahiny sy anabaviny, miaraka amin'ny fo feno alahelo sy mangidy vokatry ny fandavany ny famelan-keloka (Lk 15: 11,25; Mt 6: 14-15).
Iza no olona tsy hamela heloka?
Mahantra ireo zavaboary olombelona izay tsy mamela heloka - mampahory mangidy ny fony izy ireo ary manjary misavoritaka sy fialonana. Endrey, fangirifiriako tokoa ho an'ireo fanahy ireo izay tsy manatona ahy amin'ny fo feno fanetren-tena sy manenina ao amin'ny Sakramenta Fieken-keloka! Ary kosa, miala amiko izy ireo.
Manasa anao hijanona ao amin'ny Fitiavako aho, izay tsy hahitanao vato misakana, tsy fitsarana, tsy fanamavoana, tsy mangidy. Manasa anao aho ho Fitiavako manokana, mba tsy hiatrika sakantsakana ny famindram-poko, ary enga anie izao rehefa manomboka ny fiovana ho an'ny zanak'olombelona, ​​ny fiovana amin'ny fisedrana sy ny loza, koa mandresy amin'ny finoana ny Fanahy Masiko izay hanome anao ny fahasoavan'ny faharetana sy ny Fitiavana amiko mba tsy ho tavela eny amoron-dàlana ianao, raha mendrika hahazo fahasoavana toy izany ianao, izay miasa sy hanao ny sitrapoko masina.
Ny zanako dia hisotro ny kaopy amin'ny fahotany manokana, ireo fotoan'ny fahaterena ireo vokatry ny hadisoana lehibe niseho tamn'ity taranaka ity. Ary faritra ao Santa Fe de la Vera Cruz no hizaha toetra be.
Mivavaha ho an'ity tanàna ity ao Arzantina, izay ny fijaliany dia hiparitaka manerana an'i Arzantina amin'ny alahelo sy alahelo lehibe.*
Mivavaha, ny zanako ho an'ny taniko izay nitoriako ary nitarika ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana; hiharan'ny fanafihana izany.
Mivavaha, ny ankizy ho an'ny faritr'i Santa Cruz any Brezila. Dia hijaly.
Mivavaha, anaka, ho lasa mazava ny ady tsimoka eo imason'ny zanak'olombelona ary hahita ny ady hafa nipoitra ny olombelona.
Mivavaha, satria ny lalàn'ny famindramponako dia akaiky ny zanak'olombelona, ​​ka mila maharitra amin'ny Finoana ianao, ka aorian'ny fampitandremana** Ireo anjeliko mijanona eto an-tany dia mety hitondra fanahy mahatoky amiko izay tokony hitoriany sy ny toerana ilana hamporisihana ireo mahatoky.
Ny vavaka dia hery ho an'ny Vahoaka, ary ny Fandraisana amin'ny Vatoko sy ny Rako no fanosorana isan'andro ho an'ireo mandray ahy. Amin'izao vanim-potoana izao rehefa nakatona ny fiangonako — mariky ny zavatra ho avy - tsy tokony ho kivy sy very ny oloko, fa ampaherezina miaraka amin'ny fiombonan'izy ireo teo aloha ary hiandry am-paharetana. Avy eo dia homena ny fanandramana faharoa an'ny Fanahy Masiko aorian'ny fampitandremana ho an'ny olo-marina sy mahatoky mba ho famporisihana ho an'ireo rahalahiny sy anabaviny ireo.
Ny Famindrampoko dia tsy manadino ny filàn'ny fireneko, ary ny Fanahy Masiko ary ny arkeziko masina sy ny anjeliko tsy handao ny oloko irery.
Tiako ianao, ry oloko, hitahy anao aho.
Aza matahotra, ry zanaka!
Matokia ny famindrampoko izay tsy manam-petra!
Ry Jesosy, mino Anao aho.
* Faminaniana momba an'i Arzantina…
** Fanambarana momba ny fampitandremana lehibe amin'ny zanak'olombelona ...
Posted in Luz de Maria de Bonilla, Messages, Fampitandremana, fanavaozana, fahagagana.
← Pedro Regis - Tano ny…
Pedro Regis - Rosary ary… →